PROJECTS – ဖွံ့ဖြိုး မြန်မာ စွမ်းအား
ဖွံ့ဖြိုး မြန်မာ စွမ်းအား
နှစ်လမ်းတစ်ဆိပ်ကမ်း နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်
စစ်တွေ – ပုဏ္ဏ္ဏားကျွန်းကားလမ်း
တည်ရှိနေသောကားလမ်း အဟောင်းအား စက်မှုဇုန် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လျင်မြန်လွယ်ကူစေရေးအတွက် စစ်တွေမြို့မှ ပုဏ္ဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်သို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ (၆) လမ်းသွား လမ်းမသစ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော် သွားမည်။
ကျောက်ဖြူနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများ
ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း စစ်တွေရေနက်ဆိပ်ကမ်း Sittwe isacity found in Rakhine, Myanmar. It is located 20.15 latitude and 92.90 longitude and it is situated at elevation5meters above sea level. Sittwe hasapopulation of 177,743 making it the biggest city in Rakhine. It operates on the BURT time zone. Country Myanmar State Rakhine Population 177,743 […]
ကျောက်ဖြူ – မူဆယ် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အမြန်မီးရထားလမ်း
မူဆယ်မြို့မှစတင်ပြီး ကွတ်ခိုင် – သိန်းနီ – လားရှိုး – သီပေါ – ကျောက်မဲ – ပြင်ဦးလွင် – မန္တလေး – မိထ္တီလာ – နေပြည်တော် – မင်းဘူး – အမ်း – ကျောက်ဖြူ အထိဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း 1400km ရှည်လျားပြီး တစ်နာရီ 200km မောင်းနှင်နိုင်သော A အဆင့် လျှပ်စစ်မီးရထားလမ်းဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၁) အမ္း – မင္းျပား – ေပါက္ေတာ – စစ္ေတြၿမိဳ႕အထိျဖစ္သည္။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၂) အမ်းမြို့မှ ပြည် – တောင်ကုတ် – ရမ်းဗြဲ အထိဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၃) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွ […]
ကျောက်ဖြူ-နမ့်ခမ်း (၈) လမ်းသွားနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အမြန်ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီး
နမ့်ခမ်းမြို့မှ မိုင်းဝီး – နမ္မတူ – သီပေါ – ကျောက်မဲ – ပြင်ဦးလွင် – မိထ္တီလာ – နေပြည်တော် – မင်းဘူး-အမ်းမြို့ အထိ အဓိက (၈)လမ်းသွားလမ်းမကြီးဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း 1350km ရှည်လျားပြီး တစ်နာရီလျှင် 120km မောင်းနှင်နိုင်သော(၈)လမ်းသွားလမ်းမကြီးဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၁) အမ်းမြို့မှ ပေါက်တော် – မင်းပြား – စစ်တွေ မြို့အထိဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၂) အမ္းၿမိဳ႕မွ ျပည္ – ေတာင္ကုတ္ – ရမ္းၿဗဲ အထိျဖစ္သည္။ တိုးချဲ့လမ်းကြောင်း (၃) တောင်ကုတ် မှ သံတွဲ အထိဖြစ်သည်။
Phwint Phyo Myanmar Power © 2019 - 2021.